नेपाल आज | सम्झनामा मधेश आन्दोलन : नेतालाई कुर्षी, जनतामा निरासा
वीरेन्द्र रमण/ जनकपुर
०६३ सालको मधेस विद्रोह पछि नेपालको सामाजिक रुपान्तरण र ब्यवस्थामा सामान्य परिवर्तन देखिएपनि आम मधेसीको दैनिक जिवनयापनमा धेरै ठुलो फेरबल आएको छैन ।
विगतमा जस्ता सामाजिक समस्याहरु थिए आजपनि तिनै समस्याले मधेस ग्रसित छ। मधेस आन्दोलनको वलमा नेताहरु सत्तामा पुगेपनि मधेसी जनताको समाजिक रुपान्तरणमा भने खासै प्रभाव परेको छैन ।
प्रदेश–२ मा अहिले मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकार संचालन गरिरहेको छ । तर उनिहरुको सत्ता आरोहणले मधेसका जनता नै खुसी हुन सकेका छैनन् । यति मात्र होईन, तत्कालिन मधेस आन्दोलनका अगुवा कार्यकर्ताहरुमा समेत असन्तुष्टी ब्याप्त छ। आज उनिहरु एक्लो महसुसन गर्न थालेका छन ।
०६३ साल माघ ३ गते अधिकार प्राप्तिका लागि पहिलो मधेश आन्दोलन सुरु भएको थियो। जसको पूरा श्रेय दीपक झालाई जान्छ । उनले जनकपुरसहित धनुषा र महोत्तरीमा आन्दोलनको विगुल फुकेको थिए । तर, आज उनि आफै मधेस केन्द्रित पार्टीबाट अलग भएका छन । ‘हामीले मधेस केन्द्रित दलका क्रियाकलाप हेर्यौ, उनिहरु जनताको अधिकार भन्दा पनि परिवारवादमा रमाए’ उनले भने।
मधेश आन्दोलन माघ ३ गतेदेखि जनकपुरधामबाट शुरु भएपनि सिरहाको लहानमा माघ ५ गते रमेश महतोको हत्यापछि झनै उग्र भएको थियो । महतोकै शहादतका कारण माघ ५ गतेलाई प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ । १९ दिनसम्म चलेको पहिलो मधेश आन्दोलनकै बलमा संविधानमा संघीयता शब्दले स्थान पायो तर, अझै पनि जनताले त्यसको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् ।
मधेशको अधिकारका लागि लड्ने र मधेश आन्दोलनको अगुवाई गर्ने युवाहरु अचेल ओझेलमा छन् । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण दीपक झा हुन् । ‘हामीले आन्दोलनलाई सफल त पार्यौं तर आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ’ उनी भन्छन्–‘मधेश आन्दोलनको बेला आन्दोलनको बिरोधमा कुरा गर्नेहरु नै अहिले सरकारमा छन्, प्रदेश सरकारको नेतृत्व उनीहरुकै हातमा छ।’
पञ्चायतकालमा राजाको पक्षमा बोल्नेहरु नै अहिले ठूलो गणतन्त्रवादी र संघीयताका पक्षधर बनेको उनको भनाई छ । ‘यो सबै देखेर अहिले राजनीतिदेखि नै विरक्त लागेको छ’ उनी भन्छन्–‘अव त राजनीति देखेर नै घृणा लाग्छ।’
पहिलो मधेश आन्दोलनको बेला झालाई मधेशी जनअधिकार फोरम धनुषाको उपाध्यक्ष भएर सघाउने दिनेश पूर्वे पनि थिए । उनी पनि अहिले राजनीतिबाट टाढा छन् । मधेश आन्दोलन सफल भएपछि ०६४ सालमा तत्कालिन फोरमले सरकारसँग सम्झौता गर्यो । र राजनीतिक पार्टीको रुपमा अगाडि आयो । संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने सोच बनायो । निर्वाचनमा बुद्धिजिवी तथा राजनीति बुझ्नेहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भन्ने सोचा पूर्वे थिए । तर त्यस्तो भएन । ‘त्यसै दिनदेखि मैले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन फोरम पार्टी र उपेन्द्र यादवलाई सुम्पी दिएँ’ उनले भने–‘घरमा जान्छु श्रीमतीको कचकच, अनि भविष्य पनि अन्धकार।’
मधेस आन्दोलनवाट के पाईयो ? भन्दै श्रीमतीले गर्ने प्रश्नले आफुलाई पीडा हुने गरेको उनले वताए । ‘नेताहरुलाई कुर्सीमा बसाउनु वाहेक के पाईयो भन्दै छरछिमेकीले समेत ब्यंग्य गर्ने गरेको उनी वताउँछन्। अधिकांस आन्दोलनकारीहरुको अवस्था यसैगरी वितिरहेको उनी वताउँछन् ।
विरोधमा उत्रदै युवा
मधेस आन्दोलनको उदेश्य विपरित प्रदेश सरकारले गरिररहेको कार्यको विरोध गर्न आन्दोलनका अगुवा युवाहरु विरोधमा उत्रने भएका छन् । स्थानिय जनक चौकमा सरकारका विरुद्ध भण्डाफोर कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको एक युवाले जानकारी दिए ।
आन्दोलन कारण प्राप्त उपलब्धि तथा सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको वारेमा जनतालाई सुशुचित गर्न यस्तो कार्यक्र आयोजना गर्न लागिएको उनको भनाई छ । मधेस आन्दोलनका उपलक्धीलाई सरकारले संस्थागत गर्ने समयमा आफनो परिवार र नातागोतालाई मात्रै ध्यान दिएकाले विरोध गर्न लागिएको युवाहरु वताउँछन् ।
शहिदहरुको बलिदानीवाट प्राप्त उपलब्धिको अपहेलना गरेको र शहिदको शवमाथि खेलवाड गरिरहेको युवाहरुको आक्रोश छ।
बलिदानी दिवस मनाउँदै सरकार
प्रदेश–२ सरकारले आज प्रदेश भरि नै बलिदानी दिवस मनाउदै छ । दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिएको छ भने जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा औपचारीक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
तर, प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भने मधेश आन्दोलनबाट मधेशले के पायो र के गुमायो भन्ने विषय नै जानकारी नभएको वताउँछन् । तर, आन्दोलनकै कारण देशले संघीय गणतन्त्र पाएको र प्रत्येक नेपाली नागरिक मालिक भएको मन्त्री यादव वताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ भने देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकलगायतका मुद्दा स्थापित गराउन मधेश आन्दोलनले योगदान रहेको वताउँछन् ।